နှစ် ၈ဝတိတိ ရေမချိုးပေမယ့်လည်း ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အညစ်ပတ်ဆုံးလူသား – Myanmar
နှစ်ရက်လောက် ရေမချိုးပဲနဲ့ စာဖတ်သူများ နေနိုင်လား? ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ပါဘူး..နော်။ အီရန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ Amou Haji ဆိုတဲ့ လူကြီးကတော့ ရေမချိုးပဲနေခဲ့တာ နှစ်၈ဝတိတိရှိပါပြီတဲ့။ ကမ္ဘာမှာလည်းအညစ်ပတ်ဆုံးလူသားအဖြစ် စံချိန်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ သူ့ရဲ့ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့တာလဲ?
Haji ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၆ရက်နေ့မှာ Tehran Times မှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။ သဘာဝတရားအတိုင်းလိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့ကိုရေချိုးဖို့လာပြောတဲ့ လူတွေဆို အရမ်းလည်းစိတ်ဆိုးပါတယ်တဲ့။
အီရန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Fars ဒေသက Dejgah ရွာလေးမှာ နေထိုင်ပြီး ဖြူးကောင် နဲ့ အခြားအသီးနှံ့တွေကို ရှာဖွေစားသောက်ပါတယ်။ ဒီလို နေထိုင်မှုဘဝကို သူရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ငယ်ဘဝထဲကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကို ခံစားခဲ့ရကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့မစင်တွေကိုလည်း စားသုံးတတ်ပြီး တစ်နေ့ကို စီးကရက် ၅လိပ်သောက
Haji က ညစ်ပတ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ဆံပင်ကိုတော့ အမြဲသပါတယ်။ အံ့သြစရာအကောင်းဆုံး သူ့ရဲ့အစွမ်းစကတော့ သူ့ရဲ့ hair style ပါပဲ။ ရေမချိုးပဲနေပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ သူ့ရဲ့ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်တာ တွေ့ရတယ်။ ဒီလိုဘဝကိုပဲ သူခုံမင်နေခဲ့ပါတယ်။ ရေမချိုးပဲနေတော့ သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကရော ကောင်းပါ့မလားလို့ လူတွေက သိချင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ကိုပဲ နှစ်၈ဝကြာ ရေမချိုးခဲ့တာ ဖျားခြင်း၊ နာခြင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါဘူးတဲ့ ။ အမေရိကန် အရေပြားဆရာဝန်တွေရဲ့အကြံပြုချက်မှာ လူတွေဟာ တစ်နေ့ကို ၂ကြိမ်ရေချိုးသင့်တယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။
Haji ကတော့ ရေမချိုးလည်း ဒီဘဝမှာ သူ ကျန်းမာစွာရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့အတွက် သူ့အတွက် ဘာမှမလိုဘူး။လူတွေက သူ့ရဲ့ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ ပုံစံကိုတောင် သဘောကျနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။